korea မင်းသာမင်းသမီး အကြောင် | for try only
for try only
korea မင်းသာမင်းသမီး အကြောင်
Filed Under () by CHAN LON MON LAY on Friday, December 24, 2010
Posted at : 6:25 AM
Han Hye-jin is back on the drama
business by MBC 'Mate'
ဂျူးမွန်မင်းသမီး Han Hye-jin ပြန်လာပြီး
Jumong ဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြင့်နာမည် ကြီးလာ ခဲ့သော မင်းသမီး Han Hye-jin ဟာ TV ဇာတ်လမ် တွဲများနှင့် ၄နှစ်မျှ အဆက်ပြတ် နေခဲ့ ပါတယ်။ မင်းသမီးသည် MBC မှပြသမဲ့ Mate အမည် ရှိတဲ့ TV ဇာတ်လမ် တွင်မကြာမီ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် တော့မယ် လို့သိရ ပါသည်။
Source : Han Hye-jin is back on the drama business by MBC 'Mate'
Ha Ji-won's self celebration for her drama comeback
Ha Ji-won လည်းပြန်လာတော့မှာပါ
Ha Ji-won ဟာ TV ဇာတ်လမ် တွဲများနှင့် ၄နှစ်မျှ အဆက်ပြတ် နေခဲ့ ပါတယ်။ မင်းသမီးသည် SBS မှပြသမည့် Secret Garden အမည်ရှိသော TV ဇာတ်လမ် တွင်မကြာမီ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် တော့မယ် လို့သိရ ပါသည်။
Source : Ha Ji-won's self celebration for her drama comeback
"Daemul - Big Thing" remains atop
TV charts but sees slight drop in ratings
ကိုးရီးယား အမျိုးသမီး သမတ တစ်ဦး အကြောင်း စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်လမ်း နောက်ခံ နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ Daemul - Big Thing အမည် ရှိတဲ့ TV ဇာတ်လမ်းတွဲ ဟာ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး ၂ရက် ပြတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေထဲမှာ rating 24.35 % နဲ့ထိပ်ဆုံး က ပြေးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသမီး Ko Hyeon-jeong နဲ့ မင်းသား Kwon Sang-woo တို့ခေါင်းဆောင် ပါဝင်ပြီး SBS TV မှထုတ်လုပ် တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Source : "Daemul - Big Thing" remains atop TV charts but sees slight drop in ratings
'Pretty Boy' Lee Min-ho has
scratches on his knuckles.... Why?
မင်းသား Lee Min-ho ဟာ SBS TV ထုတ်လွှင့်မဲ့ City Hunter ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ Kang-jin အမည်ရှိတဲ့ CIA agent ဟောင်း၊ လူကြမ်းကြီး အသွင်နဲ့ ပါဝင် မှာဖြစ် ပါတယ်။
ဒီကားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ထုတ်ပြန် ခဲ့ရာ၊ fans များက မင်းသားရဲ့ လက်မှာ ချစ်ရာတွေ တွေရလို့၊ ဒီကိစ္စ ကို ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင် ဖြစ်နေကြ ပါတယ်။
မင်းသားရဲ့ agency အဆို အရ City Hunter ဇာတ်လမ်းတွဲ ရဲ့ action ခန်းတွေ ရိုက်ရာက၊ ရထားတဲ့ ဒါဏ်ရာတွေ ဖြစ်တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : 'Pretty Boy' Lee Min-ho has scratches on his knuckles.... Why?
Jang Geun-seok said that he actually drank with
Moon Geun-yeong during the shooting
ပြသဆဲ ဇာတ်လမ်းတွဲ Marry Me, Mary မှာ မင်းသား Jang Geun-seok နဲ့ မင်းသမီး Moon Geun-yeong (အွန်စောငယ်) တို့ပါဝင် သရုပ်ဆောင် နေကြ ပါတယ်. ရိုက်ကွင်းနား တဲ့အချိန် တွေမှာ ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး သောက်တတ် ကြပါတယ်။
မင်းသား Jang Geun-seok က သူဟာ တစ်ခွက်နဲ့ မှောက်နေ ပေမဲ့၊ မင်းသမီး Moon Geun-yeong ကတော့ တော်တော် သောက်နိုင်တယ် လို့ ပြောသွား ပါတယ်။
ဒီလောက် မဟုတ် ပါဘူး၊ အဖေက မူးပြီး ပြန်လာရင် အသေဘဲ လို့ပြော ထားလို့ ကျွန်မ ဟန်ဆောင် နေတာပါ၊ ရင်ထဲမှာတော့ ဘလောင် ဆူနေ ပါတယ် လို့ မင်းသမီး Moon Geun-yeong က ပြန်လည် ချေပ သွာပါတယ်။
Jang Geun-seok said that he actually drank with Moon Geun-yeong during the shooting
"NO sponsor for baby product" said
Jang Dong-gun and Ko So-young
မင်းသား Jang Dong-gun နဲ့ မင်းသမီး Ko So-young တို့ကို ခလေး အသုံးအဆောင် (baby supplies) လုပ်ငန်းရှင် များက၊ ဝိုင်းဝိုင်းလယ်အောင် ချဉ်းကပ် ကြပါတယ်။
မကြာမှီ ကမှ မွေးထားတဲ့ သူတို့ရဲ့ သားကလေး ကို sponsor လုပ်ပြီး၊ ခလေး အသုံးအဆောင် များ ကြော်ငြာ ချင်ကြလို့ ချဉ်းကပ် ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Jang Dong-gun နဲ့ Ko So-young တို့ရဲ့ အဖြေကတော့ "NO" ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Source : "NO sponsor for baby product" said Jang Dong-gun and Ko So-young
Korean fans enraged at Taiwanese
talk show over Girls' Generation
Girls' Generation ၏ fan များဒေါသထွက်ကြခြင်း
ထိုင်ဝမ် မှာ ကိုးရီးယား အနုပညာ လောက အကြောင်း TV ဆွေးနွေး ပွဲတစ်ခု မကြာမှီက ပြုလုပ် ခဲ့ ပါတယ်။ ကိုးရီးယား အနုပညာ လောက မှ အမျိုးသမီးလေး များဟာ၊ လုပ်ငန်းရှင် များ၊ အခြား အာဏာ ရှိသူ များနဲ့ ဝတ္တရား အရ ပုံမှန် အိပ်စက် ကြရကြောင်း ဆွေးနွေး သွားခဲ့ ပါတယ်။
ဆိုးသွား တာက၊ ဆွေးနွေးပွဲ စင်မြင့်ရဲ့ နောက်ခံ (background) မှာ Girls' Generation အဆိုအဖွဲ့ ရဲ့ poster ကြီးကပ်ထားပြီး၊ လိမ်ဝန်ဆောင်မှု (Sexual Service) ဆိုတဲ့ စာတန်းကြီး ရေးထား ခြင်းပါပဲ။
Girls' Generation ရဲ့ fan များ ဟာ သူတို့ အဆိုတော် တွေကို စော်ကား မော်ကား ပြုတာပဲ ဆိုပြီး ဒေါ်သ အမျက် ထွက်နေကြ ပါတယ်။
Source : Korean fans enraged at Taiwanese talk show over Girls' Generation
Big Bang အဖွဲ့ ဂျပန် Oricon Chart #1 ရရှိခြင်း
Big Bang ရဲ့ DVD အခွေ "BIG SHOW BIG BANG LIVE CONCERT 2010" ဟာ ဂျပန် နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး Oricon chart ရဲ့ ranking #1 နေရာကို ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။ October 27 ရက်နေ့ အထိ ကော်ပီ ၁၅၀၀၀ ကျော် ရောင်းချ ခဲ့ရပြီး ဖြစ်တယ် လို့လည်း သိရ ပါတယ်။
Source : Big Bang's DVD reaches No. 1 on Oricon chart
YouTube version of Kim Hyun-joong
"Naughty Kiss"abig hit
Naughty Kiss ဇာတ်လမ်းတွဲ YouTube
Naughty Kiss ဇာတ်လမ်းတွဲ (ဟန်ဆောင်အနမ်း) ကို YouTube မှာ ၁၀ မိနစ် အပိုင်း တိုလေးများ အဖြစ် သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ ကတင်ခဲ့ရာ အလွန် လူကြိုက် များနေတယ် လို့သိရ ပါတယ်။ (520,000 hits)
Naughty Kiss ဇာတ်လမ်းတွဲ ကို ကိုးရီးယား မှာ မပြသမှီ ကထဲက နိုင်ငံပေါင်း ၁၂ နိုင်ငံသို့ ရောင်းချ ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
Naughty Kiss ကားတို များကို www.youtube.com/ytkiss မှာကြည့်နိုင် ပါတယ်။
Source : YouTube version of Kim Hyun-joong "Naughty Kiss"abig hit
Explosion during 'Sleeping with the Enemy'
shooting injured one person
Sleeping with the Enemy အမည်ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင် ရိုက်နေစဉ်၊ ရိုက်ကွင်းသုံး ဖေါက်ခွဲ ပစ္စည်းများ ပေါက်ကွဲပြီး တစ်ဦး ဒါဏ်ရာ ရလို့ ဆေးရုံ တင်ထားရ ပါတယ်။ ရဲကလည်း စုံစမ်း မှုများ ပြုလုပ် နေပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်မှာ Kim Joo-hyeok, Jeong Ryeo-won, Yoo Hae-jin, Byeon Hee-bong နဲ့ Yang Jeong-ah တို့ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ကြပြီး ဒါရိုက်တာ Park Geon-yong မှဦးစီး ရိုက်ကူး နေပါတယ်။
Source : Explosion during 'Sleeping with the Enemy' shooting injured one person
Kim So-yeon will be joining 'ATHENA'
as North Korean top spy
ATHENA တွင် Kim So-yeon ပြန်ပါလာမည်
IRIS ဇာတ်လမ်းတွဲ ရဲ့ အဆက် ATHENA တွင် မင်းသမီး Kim So-yeon ဟာ မြောက်ကိုးရီးယား agent အဖြစ် ပြန်လည် သရုပ်ဆောင်မယ် လို့သိရ ပါတယ်။
ဝါရင့် သရုပ်ဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ Kim So-yeon ဟာ IRIS ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာလည်း မြောက် ကိုးရီးယား agent အဖြစ် ပြောင်မြောက်စွာ သရုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့လို့ ဆုရရှိ ခဲ့ဖူး ပါတယ်။
မင်းသမီး ရဲ့ ပြသဆဲ Doctor Champ ဇာတ်လမ်းတွဲ ဟာ နိုဝင်ဘာ လ အကုန်တွင် ပြီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးပြီးချင်း ATHENA တွင် ဆက်လက် သရုပ် ဆောင်မှာ လို့သိရ ပါတယ်။
Source : Kim So-yeon will be joining 'ATHENA' as North Korean top spy
Resilient actress relishes dramatic return
မင်းသမီး Ko Hyeon-jeong ချောမော လှပသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် သူဟာ သရုပ်ဆောင်မှု အတွက် ပိုနာမည် ကြီးပါတယ်။
မကြာမှီက ပြသွားတဲ့ Queen Seon-deok ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ သူဟာ ဒုတိယ မင်းသမီး(လူဆိုးမင်း သမီး မီရှီ) ပါ၊ ဒါပေမဲ့ ပရိသတ် က ဘုရင်မ Seon-deok (ဒုံမန်း) ထက် သူ့ကို ပိုပြီး အမှတ် ရကြ ပါတယ်။
အခု လောလောဆယ် ပြနေတဲ့ Daemul - Big Thing ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ ကိုးရီးယား အမျိုးသမီး သမတ အဖြစ် သရုပ်ဆောင် ရာမှာ၊ ကောင်းလွန်းလို့ rating ၂၆.၄% နဲ့ လူကြိုက် အများဆုံး ဖြစ်နေ ပါတယ်။
အပြိုင် ထိပ်တိုက် Rain ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲ The Fugitive Plan B ရဲ့ rating ဟာ Daemul - Big Thing ရဲ့တဝက် ပဲ ရှိပါတယ်။
Source : Resilient actress relishes dramatic return
Girls' Generation reaches gold
with Japanese single "Genie"
Girls' Generation ရဲ့ ဂျပန် Single
ကော်ပီ ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ရောင်းရခြင်း
Girls' Generation အဆိုအက အဖွဲ့ရဲ့ ပထမဆုံ ဂျပန်ဘာသာ single သီချင်းဟာ ကော်ပီ ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ရောင်းရပြီး ရွှေဓါတ်ပြား (Gold Disk) အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံရ ပါတယ်။
September 8 ကစတင် ဖြန့်ချီ ခဲ့ရာ October 31 မှာ ကော်ပီ ၁၀၁,၂၅၂ ရောင်ချ ခဲ့ရပြီး၊ Oricon Chart မှာ အဆင့် ၂၅ ချိတ်ခဲ့ ပါတယ်။
Source : Girls' Generation reaches gold with Japanese single "Genie"
U-Know Yunho cast in upcoming action drama
U-Know Yunho ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်မည်
အဆိုတော် U-Know ခေါ် Jung Yunho ဟာ Poseidon အမည်ရှိတဲ့ TV ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ တွဲဖက် မင်းသား အဖြစ် ပါဝင်တယ် လို့သိရ ပါတယ်။
ခေါင်းဆောင် မင်းသား ကတော့ မကြာမှီက တပ်က ပြန်ထွက် လာတဲ့ မင်းသား Eric Moon ဖြစ်ပြီး၊ မင်းသမီး ကတော့ Kim Ok-bin ဖြစ်ပါတယ်။
Source : U-Know Yunho cast in upcoming action drama
L to R, Top Kara member Gu Hara, actresses Koo Hye-sun
and Seo Woo, bottom - 4minute member HyunA,
actress Ko Ah-seong and Lee Se-yeong
နာမည်ကြီး မင်းသမီး နဲ့ အဆိုတော် အချို့ဟာ မကြာမှီ ကောလိပ်ကျောင်း စတက် တော့မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
ကျောင်းတက်မဲ့ နာမည်ကြီး များကို အပေါ်ပုံမှာ ဖေါ်ပြထား ပါတယ်။ အပေါ်တန်း ဘယ်မှညာ Gu Hara (Kara အဖွဲ့) , မင်းသမီး Koo Hye-sun, မင်းသမီး Seo Woo တို့ဖြစ်ပြီး၊ အောက်တန်း ဘယ်မှညာ၊ HyunA (4minute အဖွဲ့), မင်းသမီး Ko Ah-seong, မင်းသမီး Lee Se-yeong တို့ဖြစ် ကြပါတယ်။
Source : Young celebs get early admits to college for 2011
Han Chae-young cast as heroine
in Chinese film "Big Deal"
Han Chae-young တရုတ်ကားရိုက်မည်
မင်းသမီး Han Chae-young ဟာ မကြာမှီမှာ Big Deal အမည်ရှိတဲ့ တရုတ် ရုပ်ရှင်ကား တစ်ကား ရိုက်ဖို့ လက္ခံထား ပါတယ်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်က Golden Rooster award for Best Director ဆုရ ထားတဲ့ တရုတ် အမျိုးသမီး ဒါရိုက်တာ Liwen Ma မှဦးစီး ရိုက်ကူး မှာဖြစ် ပါတယ်။
Source : Han Chae-young cast as heroine in Chinese film "Big Deal"
2PM Break into World Music Chart in U.S
2PM အဖွဲ့ U.S. Billboard အဆင့် ၁၃ နေရာချိတ်ခြင်း
2PM အဖွဲ့ရဲ့ Still 02:00PM အမည်ရှိတဲ့ album ဟာ U.S. Billboard Chart မှာ အဆင့် ၁၃ ချိတ်တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
ဒီ album ဟာ တရားဝင် CD ချပ် အနေနဲ့ ရောင်းခဲ့တာ မဟုတ်ပဲ၊ အင်တာနက် digital download ရောင်းအားကို Nielsen SoundScan အဖွဲ့ စစ်တမ်း အရ Billboard 13# နေရာ ရခဲ့ တာဖြစ် ပါတယ်။
ဒီသတင်းကြောင့် 2PM အဖွဲ့ အနေနဲ့ အလွန်မှ အံ့သြ ဝမ်းသာ ဖြစ်နေကြ ပါတယ်။
Source :2PM Break into World Music Chart in U.S.
The Fugitive Plan B' Continues
Filming Without Actress Yoon Son-ha
မင်းသမီး Yoon Son-ha ဒဏ်ရာရရှိသွားခြင်း
ပြသဆဲ မင်းသား Rain ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲ The Fugitive Plan B ထဲမှာ professor Hwang Mi Jin အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသမီး Yoon Son-ha ဟာ ယာဉ်တိုက်မှု ကြောင့်ဆေးရုံ တင်ထားရ ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ဇာတ်ညွှန်း တွေပြင်ပြီး တနေ ရာရာ ခရီးထွက် နေတဲ့ ပုံမျိုး ပြင်ဆင် ရိုက်ကူးနေ ပါတယ်။ နေကောင်းရင် အလွယ် တကူ ပြန်ဝင်ပြီး ရိုက်နိုင်အောင်လည်း ဖန်တည် ထားတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : The Fugitive Plan B' Continues Filming Without Actress Yoon Son-ha
Hyeon Bin to enter military by March 2011
မင်းသား Hyeon Bin စစ်မှုထမ်းတော့မည်
မင်းသား Hyeon Bin ဟာ မဝင် မနေရ ၂ နှစ် စစ်မှုထမ်းရန် လာမဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လမှာ စစ်ထဲဝင် တော့မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
စစ်မှု မထမ်းမှီ SBS ရုပ်သံရဲ့ Secret Garden ဇာတ်လမ်းတွဲ ကိုပြီးအောင် ရိုက်သွား မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
မင်းသား Hyeon Bin ဟာ အွန်စော (မင်းသမီး Song Hye-kyo) ရဲ့ချစ်သူ လည်းဖြစ် ပါတယ်။
Source : Hyeon Bin to enter military by March 2011
Will Yoon Eun-hye come back to
the screens aftera4-year gap
Yoon Eun-hye ရဲ့ရုပ်ရှင်ကားသစ်
မင်းသမီး Yoon Eun-hye ဟာ My Black Mini Dress အမည်ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်ကား ရိုက်ဖို့ လက္ခံ ထားတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံး ပါဝင် ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင် ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်က ရိုက်ခဲ့တဲ့ My Fair Lady ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Will Yoon Eun-hye come back to the screens aftera4-year gap?
Korean film "Passerby #3" wins
award at film fest in Japan
Passerby #3 ရုပ်ရှင်ဂျပန်မှ
Passerby #3 ကိုးရီးယား ရုပ်ရှင်ဟာ ၂၃ ကြိမ်မြောက် ကျင်းပတဲ့ Tokyo International Film Festival မှ ချီးမြှင့်တဲ့ ဆုကို ဆွတ်ခူး ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင် ဟာ မကြာမှီက ကျင်းပ ခဲတဲ့ ကိုးရီးယား မှာကျင်းပ ခဲ့တဲ့ ၁၁ ကြိမ်မြောက် Jeonju International film Festival မှာလည်း ဆုရရှိ ခဲ့ပါတယ်။
Source : Korean film "Passerby #3" wins award at film fest in Japan
Eric Moon စစ်မှုထမ်းတာဝန်ပြီးဆုံးခြင်း
မင်းသား Eric Moon (31) ဟာ ဥပဒေ အရ စစ်မှုထမ်း ၂ နှစ်ပြည့်မြောက် တဲ့အတွက်၊ October 30 ရက်နေ့က တပ်ကနေ ထွက်ခွင့် ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာမှီ မှာ Poseidon လို့အမည် ရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ရန် ရှိပါတယ်။
Source : Shinhwa Eric discharged from military
မြောက်ကိုးရီးယားတွင် ကွန်ပျူတာ အခြေခံတဲ့ ကာတွန်း ရုပ်ရှင် လုပ်ငန်းများ တွင်ကျယ် နေတယ် လို့သိရ ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံ များက ဗီယက်နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ တောင်ကိုးရီးယား စတဲ့ ဈေးချိုတဲ့ နိုင်ငံ များသို့ လုပ်ငန်း များကို ကန်ထရိုက် စနစ်နဲ့ ချပေးကြ ပါတယ်။
၄င်းနိုင်ငံများ က အချို့လုပ်ငန်း များကို ဆပ်ကန်ထရိုက် ပြန်ချပေး ရာမှ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ ခံထားရတဲ့ မြောက်ကိုးရီးယား နိုင်ငံမှာ ကွန်ပျူတာ အခြေခံ ရုပ်ရှင် ကာတွန်း လုပ်ငန်းများ တွင်ကျယ် လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source : North Korea emerges as animation producer
'Dae Jang Geum' will continue its journey in Europe
နိုင်ငံတကာ သို့ ကိုးရီးယား အနုပညာ ထိုးဖေါက် ရာမှာ ရှေးဦးစွာ "နန်းတွင်းရတနာ" (Dae Jang Geum) ဇာတ်လမ်းတွဲ ကိုတင်ပို့ ပြသ စေပါတယ်။
အကြိုက်တွေ့ပြီး အသဲခိုက် သွားမှ နောက်က အခြား နာမည်ကြီး ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေနဲ့ ဆက်တိုက် ထိုးဖေါက်တဲ့ နည်းဗျူဟာ ပါပဲ။
နိုင်ငံပေါင်း ၆၀ ကျော်ကို ဒီနည်းနဲ့ပဲ ထိုးဖေါက် ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်က စတင် ပြသ ခဲ့တဲ့ "ချန်ဂင်" ရဲ့ "နန်းတွင်းရတနာ" ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ အလွန်တရာ မှ အနုပညာ အစွမ်းထက် ပါတယ်။
Source : 'Dae Jang Geum' will continue its journey in Europe
Won Bin won his first Daejong Best Actor Award
Won Bin ရဲ့အောင်မြင်မှု
၂၀၀၀ ခုနှစ်က နာမည်ကျော် ခဲ့တဲ့ Autumn in my Heart ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ နာမည်ကြီး လာခဲ့သူ များကတော့ အွန်စော (Song Hye-kyio), ဂျွှန်စော (Song Seung Hun), ထယ်စောက် (Won Bin), အွန်စောငယ် (Moon Geun Young) နဲ့ စိတ်ပုတ်မ လုပ်တဲ့ (Han Chae Young) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးဟာ ယနေ့တိုင် လျှမ်းလျှမ်းတောက် နာမည်ကြီး နေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Won Bin ကတော့ နာမည်ကြီး သော်လည်း သူရိုက် ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ နဲ့ ရုပ်ရှင် တွေကတော့ သိတ် အားရစရာ မရှိခဲ့ပါ။ Won Bin ဟာ ၂၀၀၅ နှစ်ကုန် မှာစစ်ထဲ ဝင်သွားပြီး ၂ နှစ်အကြာမှာ ပြန်ထွက် လာပါတယ်။
ထိုနောက်ပိုင်း ရိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေဟာ အလွန်ပေါက် တဲ့ block buster တွေဖြစ်လာ ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ရိုက်တဲ့ The Man From Nowhere ဟာ ဝင်ငွေ စံချိန်ချိုး ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကား အတွက် Daejong ရုပ်ရှင် ပွဲတော်မှာ အကောင်းဆုံး မင်းသား ဆုကို ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။
Source : Won Bin won his first Daejong Best Actor Award
Best Star Actors in Second Half of 2010
Are Won Bin and Sin Min-ah'
Leesprင Research Institute ရဲ့စစ်ဆမ်း ကောက်ချက် အရ ၂၀၁၀ နှစ် ဒုတိယ ၆ လ ပိုင်းမှာ လူကြိုက် အများဆုံး မင်းသား နဲ့ မင်းသမီး တို့ဟာ Won Bin နဲ့ Sin Min-ah တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
Source : Best Star Actors in Second Half of 2010 Are Won Bin and Sin Min-ah'
Koo Hye-seon's 1st feature "Magic - 2010"
invited to Tokyo film fest
Koo Hye-seon ၏ရုပ်ရှင်ဝင်နွှဲမည်
မင်းသမီး Koo Hye-seon မကြာမှီက director အဖြစ် ထုတ်လုပ် ခဲ့တဲ့ "Magic - 2010" အမည်ရှိ ရုပ်ရှင် ကို၊ ၂၃ ကြိမ်မြောက် Tokyo International Film Festival မှာ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ် ခြင်းခံထား ရတယ်လို့ သိရ ပါသည်။
Source : Koo Hye-seon's 1st feature "Magic - 2010" invited to Tokyo film fest
Lee Min-ho wins more hearts
in Asia with "Personal Taste"
အာရှတွင် Lee Min-ho အား လူပိုကြိုက် လာခြင်
အာရှ တခွင်မှာ မင်းသား Lee Min-ho ဟာ Personal Taste ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ပြီးနောက် လူပိုကြိုက် လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လောလောဆယ် Personal Taste ဇာတ်လမ်းတွဲ ကို Taiwan, Singapore နဲ့ Hong Kong တို့မှာ ပြသနေပြီး၊ Japan နဲ့ Thailand မှာ နောက်လ ပြမယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Lee Min-ho wins more hearts in Asia with "Personal Taste"
Rain rep readying lawsuit against accuser
Rain မှ Daniel Kim ကိုတရားစွဲရန်ပြင်ဆင်နေခြင်း
ကမ္ဘာကျော် LOST ဇာတ်လမ်းတွဲ မှ ကိုးရီယား ဇာတ်လိုက် Daniel Kim က Rain ဟာ လောင်း ကစား အလွန် ဝါသနာ ပါပြီး၊ လောင်းကြွေးတွေ အများအပြား တင်နေသူ ဖြစ်တယ်လို့ လူသိရှင်ကြား စွပ်စွဲ ခဲ့ပါတယ်။
Rain တို့ဘက်က ဒီကိစ္စ လုံးဝ မဟုတ်ပါ လို့ငြင်းဆို ထားပါတယ်။ များ မကြာမှီက Daniel Kim က Rain ထံမှ လောင်းကြွေး US$ 150,000 ရလိုမှု နဲ့ USA တရား ရုံးတော် တစ်ခုမှာ တရားစွဲဆို ထား ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် Rain တို့ဘက်က မခံမရပ် နိုင်ဖြစ်ပြီး နာမည် ဖျက်မှုနဲ့ ပြန်လည် တရားစွဲဖို့ ပြင်ဆင် နေပါတယ်။
Source : Rain rep readying lawsuit against accuser
Lee Min-ho is coming back asapowerful man
လူကြမ်းကြီး Lee Min-ho
လူနုနုလေး Lee Min-ho ဟာ မကြာမှီ ရိုက်ကူးမဲ့ City Hunter ဇာတ်လမ်း တွဲမှာ CIA agent ဟောင်းအဖြစ် ခပ်ကြမ်းကြမ်း သရုပ်ဆောင် မှာဖြစ် ပါတယ်။ အခု မင်းသားဟာ kickboxing သင်တန်း တက်နေ ပါတယ်။
Source : Lee Min-ho is coming back asapowerful man
Kim Tae-hee ဂျပန်ဈေးကွက်ဖက်ခြေဦးလှည့်ပြီး
မင်းသမီး ဟာ Kim Tae-hee ဂျပန်ဈေးကွက် သို့ အနုပညာ လုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ဖို့ စီစဉ် နေပါတယ်။
ဂျပန် Nikkan Sports သတင်းစာ နဲ့ အင်တာဗျူး ရာမှာ၊ ဂျပန်တွင် လုပ်ငန်းများ တိုးလုပ်ဖိုို့ ဂျပန် agency တစ်ခုနဲ့ စာချုပ်ချုပ် ထားကြောင်း၊ Hollywood ဘက်ကိုလည်း မျှော်လင့်ချက် ထားကြောင်း ထုတ်ဖေါ် ပြောဆို သွားပါတယ်။
မင်းသမီး ဟာ Kim Tae-hee မကြာမှီက ပြသွားတဲ့ IRIS ဇာတ်လမ်းတွဲ ကြောင့် ဂျပန်မှာ တော်တော် နာမည် ကြီးနေ ပါတယ်။
Source : Kim Tae-hee to expand career into Japan
Bae Yong-joon won the case
against the Japanese publisher
Bae Yong-joon တရားနိုင်ခြင်း
မင်းသား Bae Yong-joon ဟာ ဂျပန် စာပေ ထုတ်ဝေရေး ကုမ္ပဏီ တစ်ခုကို တရားစွဲး ထားပါတယ်။ အဆိုပါ ဂျပန် ကုပ္မဏီ မှထုတ်တဲ့ မဂ္ဂဇင်း တစ်ခုမှာ မင်းသားရဲ့ ဓါတ်ပုံ များကို ခွင့်ပြုချက် မယူပဲ သုံးစွဲ ခဲ့တာကြောင့် တရား စွဲတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန် တရားရုံးက မင်းသားကို အနိုင် ပေးခဲ့ပြီး၊ အဆိုပါ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ က မင်းသားကို ဂျပန်ယန်း ၄ သန်း လျှော်ကြေး ပေးဖို့ပါ အမိန့် ချမှတ် ခဲ့ပါတယ်။
Source : Bae Yong-joon won the case against the Japanese publisher
Tags: korean news | korean actor | korean actress | korean singer | korea
Posted as - [TV Drama] [KSinger] [News] [Music] [KActress] [Media] [KActor] [Movie] [Bae Yong-jun] [Hyun Bin] [Lee Young-ae] [Rain] [Yoon Eun-hye] [Eric] [Han Hye-jin] [Ha Ji-won] [Jang Dong-gun] [Kim Tae-hee] [Ko Hyun-jung] [Moon Geun-young] [Shin Min-ah] [Won Bin] [Music Band] [Lee Min-ho] [koo Hye-sun] [Han Chae-young] [U-Know] [Girls Generation] [2PM] [Ko So-young]
1 comment submit comments
End of Article No. 501 - Hot News-27 Nov 2010
Hot News-23 October 2010
Posted By - Ko Ko - October 22, 2010
Summary : (1)Kim Hyun-joong will watch [Mischievous Kiss] with his fans. (2)Rain-s [The Fugitive Plan B] recorded its lowest viewer rating, 11.9%. (3)Kim Tae-hee, Song Seung-heon to star in new drama. (4)Ha Ji-won is Korean Jolie. She turned into an [Action Queen]. (5)Actor Ryoo Si-won to wed October 26. (6)Police confirmed that Tablo isaStanford graduate. (7)Cha Seung-won has surgery, he will be in hospital for 25 days. (8)MC Mong indicted for draft-dodging. (9)Yoon Si-yoon: [99 Percent of People Said No to Me]. (10)[Girls Generation-s and Kara-s hot pants not allowed in Thailand. (11)Jang Ja-yeon-s Ex-Representative and Ex-Manager got one year jail sentence. (12)Jang Dong-gun begotason, both wife and child are healthy. (13)Ain-t No Stopping TVXQ-s Trio In China. (14)Interpark Demands Monetary Compensation From Lee Hyo-lee. (15)Actor Kwon-s management agency ruled to compensate W350 million. (16)Kim Tae-Hee is South Korea-s most beautiful woman on shyness, beauty and guns. (17)Rain military entrance date deferred to next year. (18)Song Seung-heon says wants to dine with Girls Generation and Kara. (19)Pop Queen Lee Hyo-lee Maintains Status As CF Queen. (20)Will [Athena] Exceeds Popularity of [IRIS][More...][Less...]
Kim Hyun-joong will watch 'Mischievous Kiss' with his fans
Rain's 'The Fugitive Plan B' recorded its lowest viewer rating, 11.9%
Ha Ji-won is Korean Jolie? She turned into an "Action Queen'
Actor Ryoo Si-won to wed October 26
Police confirmed that Tablo isaStanford graduate
Cha Seung-won has surgery, he will be in hospital for 25 days
MC Mong indicted for draft-dodging
'Girls Generation's and Kara's hot pants not allowed!' in Thailand
Jang Dong-gun begotason, "Both wife and child are healthy"
Ain't No Stopping TVXQ's Trio In China
Interpark Demands Monetary Compensation From Lee Hyo-lee
Actor Kwon's management agency ruled to compensate W350 million
Pop Queen Lee Hyo-lee Maintains Status As CF Queen
ဇာတ်သိမ်းကို Fans များနှင့်အတူကြည့်တဲ့မင်းသား
ပြသဆဲ Mischievous Kiss ဇာတ်လမ်းတွဲ (ဟန်ဆောင် အနမ်း) ဇာတ်သိမ်းပိုင်း ကို၊ ခေါင်းဆောင် မင်းသား Kim Hyun-joong ဟာ ၄င်းရဲ့ fans များနဲ့ အတူ ကြည့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စုပေါင်း ကြည့်ပွဲကို လူ ၂၀၀၀ ဆံ့တဲ့ Seoul Grand Park Dorm Art Hall မှာ ပြုလုပ် မှာဖြစ် ပါတယ်။
Korea, China, Japan, Hong Kong နဲ့ Taiwan တို့မှ fans ၁၀, ၀၀၀ ကျော်တို့မှ လျှောက်လွှာ တင်ထား ကြပြီး မဲချ ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Source : Kim Hyun-joong will watch 'Mischievous Kiss' with his fans
Rain's 'The Fugitive Plan B' recorded
its lowest viewer rating, 11.9%
ပြသဆဲ Rain ရဲ့ The Fugitive Plan B ဇာတ်လမ်းတွဲ ဟာ အပတ်စဉ် Wed-Thurs နေ့တွေမှာ ပြသတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း (၁) မှာ ကြည်သူ ၂၁% ကျော်ခဲ့ ပါတယ်။
တစ်ပတ် နောက်ကျ ပြီး မင်းသမီး Ko Hyeon-jeong ရဲ့ Daemul - Big Thing စင်ပြိုင် ပြချိန် မှစပြီး ကြည့်သူ ဆုတ်လာ ခဲ့တာ ယခု ဆိုရင် rating ၁၁.၉% ပဲရှိ ပါတော့တယ်။
Daemul - Big Thing ကတော့ rating ၂၀% ကျော်နဲ့ ထိပ်ဆုံးမှ ပြေးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Rain's 'The Fugitive Plan B' recorded its lowest viewer rating, 11.9%
Kim Tae-hee, Song Seung-heon
to star in new drama
Kim Tae-hee နဲ့ Song Seung-heon
မင်းသမီး Kim Tae-hee နဲ့ မင်းသား Song Seung-heon တို့ဟာ MBC ရုပ်သံရဲ့ Pasta အမည်ရှိ ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးရိုး တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူလေး တစ်ဦးနဲ့ အလွန် ချမ်းသာတဲ့ လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးတို့ ရဲ့ မေတ္တာဘွဲ့ ဇာတ်လမ်း ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Kim Tae-hee, Song Seung-heon to star in new drama
Ha Ji-won is Korean Jolie?
She turned into an "Action Queen'
Action မင်းသမီး Ha Ji-won
November 13 မှာပြသမဲ့ SBS ရုပ်သံရဲ့ Secret Garden ဇာတ်လမ်းတွဲ မှ ပိုစတာ ပုံများ ထုတ်ပြန် ရာမှာ မင်းသမီး Ha Ji-won ကို အမေရိကန် မင်းသမီး Angelia Jolie စတိုင်မျိုး အဝတ် အစား နဲ့တွေ့ရ ပါတယ်။ မင်းသား ကတော့ Hyun Bin ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Ha Ji-won is Korean Jolie? She turned into an "Action Queen'
မင်းသား Ryoo Si-won လက်ထပ်တော့မည်
Hallyu မင်းသား Ryoo Si-won ဟာ October 26 မှာ လက်ထပ်တော့ မှာဖြစ်ကြောင်း သူ့ website မှတဆင့် အသိပေး ဖေါ်ပြ သွားပါတယ်။
သတိုးသမီး ဟာ ရိုးရိုး အရပ်သူ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး မင်းသားရဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို လွယ်ထား ပါတယ်။ လက်ထပ်ပြီး မကြာမှီမှာ မွေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Actor Ryoo Si-won to wed October 26
Hip-hop အဆိုတော် Tablo ရဲ့ဘွဲ့လက်မှတ်ဟာအစစ်ပါ
Hip-hop အဆိုတော် Tablo ရရှိ ထားတဲ့ Stanford University (USA) ဘွဲ့လက်မှတ် ဟာ အစစ် ဖြစ်ကြောင်းကို ကိုးရီးယား ရဲအဖွဲ့ က သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် နဲ့ဆက်သွယ် ပြီးနောက် အတည် ပြုပေး ခဲ့ပါတယ်။
Tablo ရရှိ ထားတဲ့ Stanford University (USA) ဘွဲ့လက်မှတ် ဟာ အတုပါ ဆိုပြီး internet ထဲမှာ တိုက်ခိုက် နေတာ ကြာပါပြီး။ ရဲက မဟုတ် မမှန် သတင်း ဖြန့်နေ သူတွေကို အရေးယူ ဖို့ ဆောင်ရွက် နေပါတယ်။
Source : Police confirmed that Tablo isaStanford graduate
Cha Seung-won has surgery,
he will be in hospital for 25 days
မင်းသား Cha Seung-won ခွဲစိပ်ခံယူခြင်း
ATHENA ဇာတ်လမ်းတွဲ ရဲ့ မင်းသား Cha Seung-won ဟာ ဆေးရုံ တက်ပြီး ခွဲစိပ် ကုသမှု ခံယူ နေရ ပါတယ်။ October 20 မှာ ရိုက်ကွင်း ရှိရာ Hawaii သို့လိုက်သွား မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Cha Seung-won has surgery, he will be in hospital for 25 days
အဆိုတော် MC Mong စွဲချက်တင်ခံရပြီး
အဆိုတော် MC Mong ကို ကိုးရီးယား ရဲအဖွဲ့ က စစ်မှု ထမ်းရန် ရှောင်တိမ်း မှုနဲ့ စွဲချက်တင် အရေးယူ လိုက်ပြီး လို့ သိရ ပါတယ်။
MC Mong ဟာ သူ့ရဲ့ သွားအကောင်း တွေကို နှုတ်ပစ် ပြီး တပ်ဝင် ဆေးစစ် ကျအောင် ကြံစည် တာမှန်ကန် တယ်လို့ တွေ့ရှိ ရတဲ့ အတွက် ယခုလို စွဲချက်တင် အရေးယူ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source : MC Mong indicted for draft-dodging
အလွန်အောင်မြင်လာတဲ့ Yoon Si-yoon
မနှစ်က လူမသိ သူမသိ မင်းသား Yoon Si-yoon ဟာ၊ ဒီနှစ် လူတိုင်း သိတဲ့ super star မင်းသား တစ်လက် ဖြစ်လာ ပါတယ်။
မင်းသား ပါဝင် ခေါင်းဆောင် တဲ့ Bread, Love, and Dreams ဇာတ်လမ်းတွဲ ဟာ rating ၅၀.၈% အထိ ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် သရုပ် မဆောင် နိုင်ဘူး၊ မဖြစ်နိုင် ဘူးဆိုပြီး ဆန့်ကျင် ကြတဲ့ သူများက ၉၉% ရှိပြီး၊ ထောက်ခံတဲ့ ကျန်တဲ့ ၁% က အမေရယ် အဖေရယ် ကျွန်တော့ မန်နေဂျာ ရယ်ဘဲ ရှိခဲ့ ပါတယ်လို့၊ မင်းသားက ပြောသွား ပါတယ်။
မင်းသား Yoon Si-yoon ဆက်လက် အောင်မြင် ပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေးအပ် ပါတယ်။
Source : Yoon Si-yoon: '99 Percent of People Said 'No' to Me'
'Girls Generation's and Kara's
hot pants not allowed!' in Thailand
ကိုးရီးယား အမျိုးသမီး အဆိုအဖွဲ့ များရဲ့ ဘောင်းဘီတို hot pants ဖက်ရှင်ဟာ အာရှတလွှာမှာ အလွန် ခေတ်စါး လာပြီး တောမီးလို ပြန့်နှံ့ လာပါတယ်။
ဘောင်းဘီတို ဝတ်ရင် ခြင်ကိုက်ခံ ရပြီး သွေးလွန် တုတ်ကွေး ပိုဖြစ်နိုင်လို့ ထိုင်း မိန်းခလေး များ ဘောင်းဘီတို မဝတ် သင့်ကြောင်း ထိုင်းအစိုးရ က ထုတ်ပြန် ကြေငြာ ပါတယ်။ (ယောက်ျား လေးတွေ ရင်ခုံပြီး အသက်တို မှာလည်း ရှိသေးတယ် နော်)
Source : 'Girls Generation's and Kara's hot pants not allowed!' in Thailand
Jang Ja-yeon's Ex-Representative and
Ex-Manager got one year jail sentence
Boys Over Flowers (F4) ဇာတ်လမ်းတွဲ မှ အရံမင်းသမီး တစ်လက် ဖြစ်တဲ့ Jang Ja-yeon ဟာ ၂၀၀၉ မတ်လ က မိမိ ကိုယ် မိမိ သတ်သေ သွားခဲ့ ပါတယ်။
သေတမ်းစာ ထဲမှာ သူ့ကို အထက် လူကြီး များနဲ့ အိပ်စက်ဖို့ အဆက် မပြတ် ဖိအား ပေးခံရ တာကို မခံနိုင် တော့လို့ သတ်သေ တာပါလို့ ရေးထား ခဲ့ပါတယ်။
ဒီကိစ္စ အတွက် Agent Mr. Kim နဲ့ မန်နေဂျာ Mr. Yoo တို့ကို ထောင်ဒါဏ် ၁ နှစ်စီ ချလိုက်တယ် လို့သိရ ပါတယ်။
Jang Dong-gun begotason,
"Both wife and child are healthy"
Jang Dong-gun အဖေဖြစ်ပြီး
မင်းသား Jang Dong-gun ရဲ့ ဇနီး မင်းသမီး Ko So-young ဟာ October4က သား ယောက်ျား လေး ဖွားမြင်တယ် လို့သတင်း ရရှိ ပါတယ်။ မိခင်ရော ခလေးပါ ကျန်းမာစွာ ရှိကြ ပါတယ်။
Source : Jang Dong-gun begotason, "Both wife and child are healthy"
TVXQ အဖွဲ့မှ Xiah Jun-su, Micky Yoochun နဲ့ Hero Jae-joong တို့ဟာ 2010 East Asia All Stars Concert မှာ ပါဝင် ဆင်နွှဲ ကြပါမယ်။ ထို့ကြောင့် ဂျပန်မှာ လုပ်မဲ့ show ပွဲတွေကို ဖျက်လိုက် ရပါတယ်။
တရုတ်ပြည် က fans များဟာ သူတို့ ဆီက show ပွဲ အစီအစဉ် တွေလည်း ဖျက်လိုက်မှာ အလွန် စိုးရိမ် နေကြ ပါတယ်။
အဆိုတော် များရဲ့ တရုတ်ပြည် agent က တရုတ် show ပွဲများ ဆက်လုပ် မှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြော သွားလို့ အားလုံး စိတ်အေး သွားကြတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Ain't No Stopping TVXQ's Trio In China
Interpark Demands Monetary
Compensation From Lee Hyo-lee
Lee Hyo-lee ရဲ့ Agency လျှော်ကြေးတောင်းခံရခြင်း
Lee Hyo-lee ရဲ့နောက်ဆုံး album မှာ ခိုးချ သီချင်းတွေ ပါခဲ့လို့ အကြီးအကျယ် ပြဿနာ တက်ခဲ့ ပါတယ်။
ဒီနောက်မှာ Lee Hyo-lee ဟာ သူ့ရဲ့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု အားလုံးကို ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ ပါတယ်။ Interpark လုပ်ငန်းစု က ဒီကိစ္စကြောင့် အဆိုတော်ရဲ့ ရိုးသား ပွင့်လင်း တဲ့ ပြရုပ်ဟာ မှေးမှိန် ခဲ့ရကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ၄င်းတို့ ရဲ့ ရောင်းအား ကျဆင်း ပြီးဝင်ငွေ လျှော့ခဲ့ရ တယ်ဆိုပြီး တရားစွဲ ပါတယ်။
Lee Hyo-lee ရဲ့ Agency ထံမှ ပေးလျှော်ရန် တောင်းခံတဲ့ လျှော်ကြေး ကတော့ 490 million won ဖြစ် ပါတယ်။
Actor Kwon's management agency
ruled to compensate W350 million
မင်းသား kwon Sang-woo ရဲ့
မင်းသား kwon Sang-woo ရဲ့ Agency မှ ContentsLab လုပ်ငန်းစု သို့ လျှော်ကြေး 350 million won ပေးရ မယ်လို့ Seoul Central District Court က မကြာမှီ က အမိန့် ချမှတ် လိုက်ပါတယ်။
မင်းသား agency ဟာ ဖြေဖျော်ရေး ကိစ္စများ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချုပ်ဆို ထားတဲ့ စါချုပ်ပါ အချက်အလက် များကို အပြည့် အဝ ဆောင်ရွက် ပေးရန် ပျက်ကွက် ခဲ့တာ ထင်ရှားလို့ ယခုလို လျှော်ကြေး ပေးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Kim Tae-Hee: South Korea's 'most
beautiful woman' on shyness, beauty and guns
မင်းသမီး Kim Tae-Hee ဟာ ဂျပန်မှာ အလွန် ခေတ်စား နေပါတယ်။ ဂျပန် media များက မင်းသမီးကို ကိုးရီးယား နိုင်ငံရဲ့ အလှဆုံး အမျိုးသမီး အဖြစ် တင်စား လာကြပါတယ်။ Kim Tae-Hee ဟာ IRIS ဇာတ်လမ်းတွဲ တွင် စပိုင်မ အဖြစ် ပါဝင် ပြီးနောက် အထူး နာမည် ကြီးလာ ပါတယ်။
မင်းသား Rain (28) ဟာနိုင်ငံသား တိုင်းရှိတဲ့ တာဝန်အရ စစ်မှုထမ်း ချိန်တန် နေပါပြီး။ သို့သော် သူတင်ပြတဲ့ အထွေထွေ အကြောင်း ပြလျက် များကို လက်ခံ တဲ့အတွက်၊ ကိုးရီးယား Military Manpower Administration (MMA) က စစ်တပ်သို့ သတင်း ပို့ရမဲ့ ရက်ကို တစ်နှစ် ဆိုင်းငံ့ ခွင့်ပြုလိုက် ပါတယ်။
Source : Rain military entrance date deferred to next year
Song Seung-heon says wants to
dine with Girls' Generation and Kara
မကြာမှီက ပြုလုပ်တဲ့ အင်တာဗျူး တစ်ခုမှာ မင်းသား Song Seung-heon (33) က Girls' Generation, Kara, After School နဲ့ f(x) စတဲ့ music band တွေက အဆိုတော် မလေး များနဲ့ ညစာ (dinner) အတူ စားလိုကြောင်း ထုတ်ဖေါ် ပြောသွား ပါတယ်။
ကြော်ငြာဘုရင်မ Lee Hyo-lee
Lee Hyo-lee (33) ကိ်ု ကိုးရီးယား ကြော်ငြာ လောကရဲ့ ဘုရင်မ တစ်ဆူ အဖြစ် တင်စားထား ကြပါတယ်။
သာမန်အာဖြင့် သုံးလေးနှစ် ကြာလာရင် မျက်နှာသစ် အငယ် လေးများနဲ့ အစားထိုး တတ်ကြ ပါတယ်။ Lee Hyo-lee ကတော့ ၁၀ နှစ် ရှိသွား ပါပြီး။ ယခု အထိ ကျမသွားပဲ လူကြိုက် များနေဆဲ ဖြစ်တဲ့ CF Queen ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Pop Queen Lee Hyo-lee Maintains Status As CF Queen
IRIS ထက်သာမယ်လို့တစ်ပြေးနေတဲ့ ATHENA
နာမည်ကျော် ဇာတ်လမ်းတွဲ IRIS ရဲ့ အဆက် ATHENA ဟာ IRIS ထက်သာ မယ်လို့ တစ်ပြေး နေပါတယ်။ မင်းသား Jeong Woo-seong, Cha Seung-won မင်းသမီး Soo-ae, Lee Ji-ah တို့ခေါင်းဆောင် ပါဝင် ပါမယ်။
Super Junior အဖွဲ့မှ Choi Si-won က လက်သင် စုံထောက် ပေါက်စလေး အဖြစ် ပါဝင်ပြီး၊ အဆိုတော် BoA နဲ့ မင်းသမီး Lee Bo-yeong တို့က ဧည့်သည်တော် သရုပ်ဆောင် များအဖြစ် ပါဝင် ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြက္ခဒိန်လေးပါ..သူကတော့ .net frem လိုပါတယ်
၂၀၁၁အတွက် အကောင်းဆုံး Avira
သတ္တိကောင်းတဲ့ boy တွေ
၂၀၁၀ အတွင်း အထင်ရှားဆုံး
အလန်းတွေနဲ့ hip hop
flash သီချင်းကို mp3 နဲ့ video ပြောင်းချင်သူများအတ...
Game Download Websites များ
Copyright © 2010 for try only All rights reserved. Wordpress Theme by Skinpress | Powered by Blogger